Maitiro ekumisikidza kana kuremadza Siri mazano mune zvinoshandiswa | IPhone nhau
Chokwadi pane imwe nguva iwe watambira chiziviso pane yako iPhone ne zano raSiri pane rinovhara screen kuwedzera kuonana, kuti uone mamwe mafoto erabhurari yako kana kunyange dzimwe nguva kuratidza mawebhusaiti isu tichitsvaga chimwe chinhu muSafari.
Aya mazano anogona kunge akanaka kwazvo kana iwo angave asina kunaka kwazvo, saka zvakakosha kuti uve pachena kuti anogona kumisikidzwa kana kuremedzwa mukuda kwedu kunyangwe akaiswa pekutanga. Nhasi tichaona iyo nzvimbo uye yakapusa nzira yatinayo kuti mira kuratidza aya mazano eapp pa skrini rakakiiwa.
Maapplication ese ane mazano anoshanda pane yedu iPhone
Mukutaura isu tinofanirwa kujekesa kuti Apple inochengeta yedu pachedu dhata uye ivo vanonyorerwa zvakakwana, kuva zvakavanzika zvachose, saka havazotengesa navo. Muchiitiko ichi, ivo vanochengetwa pamidziyo yatakatema neICloud ine imwecheteyo Apple iD. Chiitiko chezano chinosimudzira nekufamba kwenguva asi Apple inojekesa kuti iyi data haina kushandiswa kuigovana nemakambani echitatu-bato.
Para shandisa kana kumisa mazano eSiri mune chero app pane yedu iPhone Isu tinongofanirwa kuwana: Zvirongwa> Notification> Siri Mazano. Muchikamu chino tichawana runyorwa rwezvishandiso zvinogona kuratidza mapfupi pane yakavharwa skrini uye saka zviri izvo zvakanaka pane ino saiti yatichaenda kuita. Kana tangori mukati isu tinongofanirwa kuti tiregedze maapplication atisingade kugamuchira mazano uye ndizvozvo. Iri basa rakareruka uye iwe unofarira kudzikisa huwandu hwezaziso zvaunogamuchira pane yako iPhone zvishoma, nekuti maapplication ese anogoneswa nekutadza uye mune dzimwe nguva anogona kugumbura.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Maitiro ekushandura Siri Mazano pane kana kudzima mumaapp
Chiri kundinetsa ndechekuti pese pandinoisa app nyowani ndinofanira kuenda ikoko kuti ndiishandise. Ivo vaizofanira BVIRA nekukanganisa.
Right JM, ini ndaizodawo kuti vauye vakaremara nekutadza.
Shanduko hadziishandiswe kwandiri, zvinoshandiswa zvandinobvisa zvinoramba zvichioneka.
Apple inotora nzvimbo yechitatu pane Fortune 500 runyorwa